Isitolo se-Apple | Izindaba ze-IPhone
I-Las Apple Store Yizitolo ezisemthethweni ze-Apple, kuzo singathola yonke imikhiqizo yazo isetshenziselwe ukusebenzisana nabo, abasebenzi babo bakunake njalo ukukusiza. Sekukonke esitolo se-Apple, kokubili ekuhlelweni nasekunakekelweni, kubonakala sengathi abafuni ukuthengisa imikhiqizo, bafuna ukuthengisa ulwazi lomsebenzisi. Lapha uzothola zonke izindaba mayelana nezitolo ze-Apple Store, imininingwane mayelana izitolo ezintsha ezivulwa nsuku zonke hhayi eSpain kuphela, kodwa emhlabeni wonke.
Uhlelo lokusebenza lwe-Apple Store selivele lisivumela ukuthi sakhe uhlu lwemikhiqizo
Por U-Ignacio Sala kwenza Izinyanga ze-6 .
I-Apple yethule isibuyekezo esisha sohlelo lokusebenza lwe-Apple Store, uhlelo lokusebenza esingakwazi ukuthenga ngalo kuphela, ...
Namuhla ngezikhathi ze-Apple ziphinde zabhekana ubuso nobuso eYurophu
Por UKarim Hmeidan kwenza Izinyanga ze-9 .
I-Apple yenza imikhiqizo emihle, futhi okubaluleke kakhulu: yenza imikhankaso emikhulu yokukhangisa ukuthengisa imikhiqizo yayo… Kepha…
I-Apple iyaqhubeka nokufuna ukuthi abasebenzisi abavakashela izitolo zayo bakwenze lokho ngesifihla-buso
Por U-Ignacio Sala kwenza Unyaka we-1 .
Ngenkathi amazwe eqhubeka nokuqhubekela phambili ngenqubo yokugoma abantu abaningi, amanye amazwe aseqalile ukuxegisa imithetho ye ...
Kusukela ngoMsombuluko owedlule, abakwa-Apple bathathe isinqumo sokuvala zonke izitolo zabo abazisabalalise ezweni elingumakhelwane, i ...
Ivale iwebhusayithi ye-Apple ukuze iqale ngokubhukha
Por UJordi Gimenez kwenza Unyaka we-1 .
Njengoba kuvame ukwenzeka kulezi zimo, inkampani yeCupertino isanda kuvala zonke izitolo eziku-inthanethi ekuqaleni...
I-Apple izokwamukela kuphela izinhlelo zokusebenza eziqinisekisa ukugoma kuziphathimandla zezempilo
Por UToni Cortés kwenza Unyaka we-1 .
Nakulokhu futhi, ukulawula okugxekayo okusetshenziswa yi-Apple ngaphezu kwezinhlelo zokusebenza ezishicilelwe ku-App Store yayo kuqinisekisa ukuthi ...
Izitolo zakwa-Apple eMadrid zivulekile kepha kunemikhawulo
Por UJordi Gimenez kwenza iminyaka 2 .
Inkampani yaseCupertino yavula kabusha izitolo zayo eziningi eMadrid emahoreni ambalwa edlule ukwenza ukulethwa, ukusetshenziswa ...
I-Apple ivula i-Apple Store Online eNdiya
Por UKarim Hmeidan kwenza iminyaka 2 .
I-India ingelinye lamazwe anamandla amakhulu, zonke izinkampani ezinkulu zobuchwepheshe zibeke izinto zazo ...
NgoSepthemba 23, i-Apple ivula i-Apple Store eku-inthanethi e-India
Por U-Ignacio Sala kwenza iminyaka 2 .
Ekupheleni kuka-Agasti, sikwazisa ngokwethulwa okuzayo kwe-Apple Store e-India, i-Apple Store ...
I-Apple ayivumi ukuvuselelwa kuzinhlelo zokusebenza eziningi zamaShayina ku-App Store
I-Apple ifrize ukubuyekezwa kwezinkulungwane zemidlalo etholakala ku-App Store, ngoba ...
Amagama Ezimanga umdlalo wokugcina wamagama wokusesha
Kwesinye isikhathi ukuthola umdlalo ojwayelekile osenza "sicabange" kancane akulula phakathi kokuhlukahluka okuningi. Ku…